Dombo rekutanga re iPhone 7 Plus rinowanikwa muChina | IPhone nhau
Izvo zvisikwa uye kugona kugona kwemamwe makambani muChina hakuregi kutishamisa. Kana chigadzirwa chakakosha chakatangwa, isu tine zvishoma zvekumirira kuti tione dombo rakagadzirwa munyika huru yeAsia. Uye kwete izvo chete, ivo zvakare dzimwe nguva vanogadzira zvigadzirwa zvinoenderana nekunzwa pamberi peyakatanga kuona mwenje wezuva. Izvi ndizvo zvakaitika neinotevera iPhone, isu tatova neyayo yekutanga iPhone 7 dombo rakagadzirwa muChina.
Ehe, iwe haugone kukumbira mapereji kune iyo elm uye neavo vanogadzira iyi mhando yechigadzirwa havatarise zvakanyanya pamashoko acho, sezvauchaona mumufananidzo pazasi pemitsara iyi. Mufananidzo uyo unotungamira ichi chinyorwa wakagadzirwa mwedzi yapfuura nekambani yekugadzira zvinhu zvichibva paruzivo iyo, mukufunga, ingadai yakauya kwavari ichibva kuCupertino. Sezvauri kuona, mumufananidzo wapfuura ivo vakatarisa pane zvakadzama uye isu tinogona kuona Yechokwadi Tone kupenya, iyo mbiri kamera uye mabhendi eiyo antennas mumufananidzo wakangwarira kwazvo.
IPhone 7 Plus dombo rakagadzirwa muChina
Mumufananidzo wekare ndakamaka zvinhu zvakati wandei zvisimo mune yavo saiti, kana zvisiri sezvavanofanirwa. Chinhu chekutanga iringi oval yekamera. Shanduro dzatakaona kusvika zvino dzinoratidza izvo hapazovi nemheteKana zvisiri, ichave iri nyaya inomira kunze, zvakanyanya kana zvishoma sezvo ichimiririrwa mumusoro wemufananidzo. Kurudyi isu tine flash uye hatigone kusiyanisa kuti kune mavara maviri, saka haisi Toni Yechokwadi. Pazasi isu hatisi kuona iyo Smart Connector iyo yanga iripo mukudonha kwese kweiyo iPhone 7 Plus / Pro, kana iwo mavara "iPhone". Asi chinonyanya kukosha ndechekuti avo vakagadzira chishandiso ichi havasi kuyedza kubiridzira chero munhu uye tinogona kuverenga chinyorwa "Chakagadzirwa naTaiwan - Yakagadzirwa muCHINA".
Iko hakuna mifananidzo yepamberi, asi pamwe haina girazi rakatenderedzwa kumagumo, iro rinozivikanwa se2.5D, uye kana tikaritungidza, taigona kuzosangana neshanduro yeAroid. Chero zvazvingaitika, ipapo tinayo, yekutanga dombo re iPhone 7 Plus.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Dombo rekutanga re iPhone 7 Plus rinowanikwa muChina